Bogga ugu weyn Intee le'eg ayay qaataan dagaalyahannada UFC? Dhammaan waxaad u baahan tahay inaad ogaato
Ma la yaabtay inta ay le'eg tahay dagaalyahannada UFC? Maqaalkani wuxuu si weyn uga jawaabi doonaa arrintan.
Ultimate Fighting Championship (UFC) waa tartan faneedka dagaalka caanka ka ah Mareykanka iyo guud ahaan aduunka dad badanna waxay u maleeyaan inay .
Dagaalyahanno badan oo UFC ah ayaa ku dadaala in ay caan noqdaan oo ay ku guuleystaan ​​suunka horyaalnimada ee kala duwan laakiin hal kaliya ayaa soo baxay inuu noqdo guuleystaha.
Hal magac oo soo noqnoqday sannad kasta waa halgamaagii UFF ee halyeeyga ahaa, Connor McGregor. Waxaa lagu tiriyaa inuu yahay mid ka mid ah kuwa ugu dakhliga badan 1%.
Waa kuma Dagaalyahan UFC?
Farqiga u dhexeeya IMMAF, WWE, iyo UFC Fighters
Intee le'eg ayaa la bixiyaa UFC Fighters?
Sidee Mushaarka U Helaan Dagaalyahannada UFC?
1. UFC mushaharka aasaasiga ah
2. Kafiil iyo taageero
3. Gunnooyinka UFC iyo ganaaxyada
Qeybaha cinwaannada MMA
Su'aalaha la isweyddiiyo ee ku saabsan intee in le'eg ayaa la siiyaa dagaalyahannada UFC? Dhammaan waxaad u baahan tahay inaad ogaato
Intee in le'eg ayay dagaalyahanada UFC helaan lacag dagaal kasta?
UFC mushahar ma hesho sannadkii?
Maxay dagaalyahannada UFC qaarkood u helaan mushaar aad u yar?
UFC ama dagaalyahannada kale ee MMA mushahar ma helaan haddii ay guuldarraystaan?
Waa kuwee dagaalyahannada UFC ee ugu mushaharka badan 2022?
Dadka qaarkiis, noqoshada dagaalyahanka UFC waa shaqo riyo ah oo aqbali doonta sababtoo ah lacagaha waaweyn ee la kasbado waa haddii aysan u baahnayn inay tababaraan, la dagaallamaan, ama la garaaco.
Dadka intiisa badan, dagaalyahannada UFC waxaa loo arkaa hal shay iyo hal shay oo keliya - fannaaniinta dagaalka ee tababaran oo ku maaweeliya daawadayaasha xirfadahooda. Labadan qaybood ee dadka waxa laga yaabaa inay sax yihiin ama aanay sax ahayn.
Si kastaba ha ahaatee, labadoodaba waa loo baahan yahay si ay u sameeyaan Horyaallada Dagaal ee ugu dambeeya waxa maanta jira.
Dagaalyahan UFC waa dagaalyahan xirfad leh oo tababaran oo adeegsada fanka dagaalka xirfado uu kaga adkaado ka soo horjeeda ciyaar kasta oo la qorsheeyay iyadoo la raacayo shuruucda UFC ee tartanka.
Lagdamaade, feedhyahan, ama kickboxer si ay u noqdaan dagaalyahan UFC, waa in uu u tartamo tartamo hoose oo uu ku guulaysto ka hor inta aanu u qalmin dagaalka UFC.
Maadaama UFC ay u taagan tahay Ultimate Fighting Championship, waxaa jira maamulka kaliya dagaalyahannada ugu sarreeya kuwaas oo ka soo shaqeeyay ilaa hal ama dhowr horyaal oo hoose.
XIDHIIDHKA: 10 -ka Moodel ee ugu Lacagta Badan Adduunka 2022 -ka
Akhri: Dab -demiyeyaasha Tabaruca ah Lacag ma helaan? Waxaan rabaa inaan noqdo mid
Sababtoo ah isfaham la'aanta guud ee dabeecadda IMMAF iyo WWE, UFC ayaa mararka qaarkood ku wareersan labadoodaba.
Waa muhiim inaan sheegno farqiga u dhexeeya maydadkan iyo dagaalyahannadooda. Fursadaha laga yaabo in taageeruhu uu si xun u isticmaalo shuruudahan waa hooseeyaan.
Kaliya waa dadka aan daawan legdinta, feerka, iyo MMA (isku-darka fanka dagaalka) kuwaas oo u baahan doona caddayn faraqa u dhexeeya IMMAF, WWE, iyo UFC.
Si kastaba ha ahaatee, waxaad la kulmi doontaa mid iyaga ka mid ah markaad ka hadlayso fanka dagaalka ee isku dhafan. Haddaba maxaad u baran weyday sharraxaadda runta ah iyo sifooyinka kala duwan.
Waxa ugu horreeya ee la ogaado waa in WWE, IMMAF, iyo UFC ay yihiin dhammaan qaybaha MMA (isku-dhafka fanka dagaalka). Marka, farqiga u dhexeeya IMMAF, WWE, iyo dagaalyahannada UFC waa mid fudud.
Dagaalyahannada IMMAF waxay u dagaalamaan Xiriirka Fanka Isku-dhafka ah ee Caalamiga ah/IMMAF. Ciyaartoyda WWE waxay u dagaalamaan World Wrestling Entertainment/WWE oo ah tartanka ugu caansan aduunka ee legdinta.
Dagaalyahannada UFC waxay u dagaallamaan Horyaalnimada Dagaalka ugu dambeeya.
Sida laga soo xigtay International Business Times, waxaa jira 3 heerar mushahar ah oo dagaalyahannada UFC loo kala saaro: hoose, dhexe, iyo sare.
Halgamiyaha aan khibradda lahayn ee leh xariijimo luminaya wuxuu kasban doonaa kaliya mushaharka aasaasiga ah ee qiyaastii $10,000 ilaa $30,000. Halka dagaalyahanada ugu fiicani ay gurigooda ku qaadan karaan inta u dhaxaysa $500,000 iyo $3,000,000 dagaal kasta.
Inta badan dagaalyahannada UFC ma samayn doonaan malaayiin sannadkii laakiin dagaalyahanno gaar ah sida Connor McGregor, Alistair Overeem, iyo Mark Hunt.
Marka la eego taageerada kali ah, MMA Guru waxay daaha ka qaadaysaa in McGregor uu sameeyo qiyaastii $25,000,000 sannadkii heshiisyadiisa.
Dagaalyahannada UFC sida Connor McGregor waxay sameeyaan malaayiin doolar dagaal kasta ka dib, laakiin celceliska dagaalyahannada UFC waxaa laga yaabaa inuusan kala bar ka dhigin.
Dagaalyahannada UFC waxay ku helaan mushahar ku salaysan mushahar ku tiirsan waxqabadka dagaalyahannada.
Dagaalyahannada UFC waa ciyaartoy gaar ah waxayna leeyihiin khibrado shaqo oo ka duwan kuwa kale. Waxaa jira saddex siyaabood oo waaweyn oo dagaalyahannada MMA ay lacagtooda ku sameeyaan.
Ururku waxa uu dagaalyahanadiisa siiya mushahar cayiman dagaal kasta. Khubarada qaar ayaa sheegaya in mushaharka aasaasiga ahi aanu ahayn mid go’an balse caddadka ay ku xidhan tahay dhawr arrimood oo ay ka mid yihiin sida dagaalku u caan baxay.
XIDHIIDHKA: Shaqaalaha Gobolka ee ugu mushaarka badan USA
Dagaalyahan kasta oo UFC ah waxaa la siiyaa qandaraasle madax-bannaan oo xor ah inuu kala xaajoodo guddiga UFC mushaharka ama mushaharka aasaasiga ah.
Lacag gunno ah ayaa lagu daraa gunnada aasaasiga ah marka dagaalyahanku guuleysto dagaalka.
Markii UFC ay heshiis kafaala-qaad ah la saxiixatay Reebok 2015, waxay bixiyaan UFC taas oo markaa siisa dagaalyahannada dhowr kun oo dagaal kasta.
Lacagtani waxay u dhaxaysaa $3,500 ilaa $35,000.
Qaar ka mid ah dagaalyahannada caanka ah ee UFC waxay go'aansan karaan inay xirtaan alaab calaamad ah sida safiirada magaca astaanta.
Astaantu, iyaduna, waxay siisaa xoogaa lacag ah dagaalyahanka lacagtanina way ku kala duwan tahay nooca heshiiska taageerada ee u dhexeeya astaanta iyo wakiilka dagaalyahanka.
Kafiilka iyo summadaha taageerada ayaa inta badan loo yaqaanaa Habeenka Dagaalka halkaas oo ay noqon doonaan dad badan oo daawanaya ciyaarta dagaalka.
Akhri: 10 ka Feeryahan ee ugu mushaarka badan aduunka |
Gunnooyinka UFC way ka duwan yihiin gunnada guusha. Waxaa la siiyaa dagaalyahannada ugu waxqabadka wanaagsan iyo dagaalyahannada ugu guulaha badan.
Gunnooyinka qolka dambe waxaa lagu bixiyaa albaabbada xiran oo cidna si cad uma oga qaddarka.
Gunnooyinka aasaasiga ah ee UFC waxaa ka mid ah 1 "dagaalka habeenka" gunnada iyo 2 "waxqabadka habeenka" gunooyinka dhacdo kasta.
Dagaalada MMA waxay dhacaan si loo helo guuleyste la caleemo saaray dhamaadka. Laakiin waxaa jira qaybo ka mid ah dagaalyahannada UFC oo ku salaysan culeyska sidaas darteedna magacyo kala duwan oo loogu talagalay guuleystayaasha qayb kasta.
Xaalad uu qofka ka soo horjeeda uusan buuxin miisaanka dagaalka, UFC waxay siin doontaa dagaalyahannada kale qayb ka mid ah mushaharkooda. Tani waa hal dariiqo oo sahlan oo dagaalyahannada UFC qaarkood ay lacag ku sameeyaan.
Waxaa xusid mudan in mushaharka uu heli doono dagaalyahannada culusi uu ka duwanaan doono kan Miisaanka Dhexe ama Fududeeyaha.
Waxaa la xusay in dagaalyahannada MMA aysan haysan lacag gaar ah ama la saadaalin karo oo ay sannadkii sameeyaan. Inkasta oo ay u muuqato in 10% ee ugu sarreeya dagaalyahannada MMA ay helaan dareenka ugu badan oo ay sameeyaan lacagta ugu badan, waa inaad tixgelisaa in dagaalyahannadani ay ku dhaqmaan saacado aan la tirin karin ka hor dagaal kasta.
XIDHIIDHKA: 15 Lacag Bixinta Ugu Badan Ee Dhakhtarka Dhakhtarka Shaqooyinka | Gobolka ugu Fiican
Sidoo kale, waxaa jira tiro badan oo taageereyaal ah oo taageeraya iyaga iyo khibraddooda dagaalku waxay ku kordhinaysaa faa'iidooyinkooda tartan ee celceliska dagaalyahannada UFC.
Waxa laga yaabaa in ay malaayiin dollar ka helaan dagaal kasta laakiin khataraha caafimaad ee la xidhiidha ciyaaraha ay dagaalyahannadani khadka soo gelinayaan waa wax aan la qiyaasi karin.
Cilmi-baarayaasha sayniska ayaa sheegaya in dagaalka MMA (UFC inclusive) uu u horseedi karo Encephalopathy dabadheeraad ah.
Xaaladdani waxay keentaa dhaawac aan laga soo kaban karin oo saameeya maskaxda, taas oo keenta calaamado ay ka mid yihiin xusuusta lumis, suuxdin, xanaaq, iyo in ka badan si ay u koraan.
Ilaha ayaa muujinaya in dagaalyahanada UFC ay helaan lacag u dhaxaysa $30,000 ilaa $500,000 halkii dagaal. Waxay inta badan ku xidhan tahay waayo-aragnimada halgamaaga, saldhiggiisa taageere, iyo habaynta maamulka.
Runtii maaha. Dagaalyahannada UFC sida xirfadlayaasha kale ee MMA waxay helaan mushahar dagaal kasta. Marka hore waxa la siiyaa mushaharka aasaasiga ah ka dib dagaal kasta iyo ilo dakhli oo kale ayaa raacaya. Dagaalyahanku wuxuu heli karaa gunno sannadle ah kafaala-qaadka ama taageerada iyo kooxda maamulkiisa.
Waxay si fudud ugu xiran tahay heerka xirfad-yaqaannimada, waayo-aragnimada iyo caannimada. Dagaalada hiwaayadda ah ee horyaalada hoose waxa laga yaabaa in laga bixiyo $10,000 ilaa $30,000 dagaal kasta oo lagu guuleysto.
Haa way sameeyaan. Waxay helayaan mushaharka aasaasiga ah iyo haddii aad caan u tahay sida McGregor Connor ama Dustin Poirier markaas waxaad weli u badan tahay inaad ku dhammaato lacag aad u badan inkasta oo aad lumiso dagaal.
Max Hollaway, Kamaru Usman, Dustin Poirier, iyo Connor McGregor waa qaar ka mid ah kuwa ugu dakhliga badan UFC kalfadhiga 2021/2022.
10 -ka Xiddig Ee Ugu Lacagta Badan Adduunka | 2022
Sidee Webull Lacag U Sameeyaa?
Hadhaaga Bayaanka vs Dheelitirka Hadda: Qeexid, Dulmar, Kala Duwanaanshaha
20 Qofka Ugu Mushaarka Badan TV -ga | 2022
8 Takhasusyada Kaaliyaha Dhakhtarka ee Ugu Lacag Badan 2022
Kaaliyaha dhakhtarku waa bixiye caafimaad kaas oo fuliya qorshooyinka daawaynta ka dib marka la ogaado xanuunka. Waxay qoraan…